စက်မှုလုပ်ငန်းအလုံးစုံ အန္တရာယ် အာမခံ Industrial All Risks (IAR)
မတော်မတဆဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပါ အကျုံးဝင်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအလုံးစုံ အန္တရာယ်အာမခံ ပေါ်လစီနှင့်အတူ လူကြီးမင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အကာအကွယ်ကို ရယူခံစားလိုက်ပါ။ ၎င်းတွင် မီးအန္တရာယ်၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ ငလျင် စသည့်အကာအကွယ်များပါဝင်ပါသည်။
Enjoyawide scope of cover on your property with an Industrial All Risk policy that encompasses accidental loss and property damage. This includes damage caused by fire, flooding, earthquakes, etc.
ကန်ထရိုက်တာ/တည်ဆောက်မှုအလုံးစုံ အာမခံ Contractors’/Erection All Risks
KBZMS သည် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း အဆင့်များအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များအတွက် အထူးအာမခံဖြေရှင်းချက်များအား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
During the construction and erection phases, KBZMS provides customized insurance solutions for risks ranging from transport, all the way to operational risks.
Bailee Liability အာမခံသည် သင့်စောင့်ရှောက်မှု/ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးသွားသောအခါတွင် သင့်အား တာဝန်ယူမှုမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ပေါ်လစီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မီးနှင့်တွဲဖက်ဘေးအန္တရာယ် အာမခံ Fire & Peril Insuranc
KBZMS ၏ မီးနှင့် အန္တရာယ် အာမခံဖြင့် မထင်မှတ်ထားသော ဘေးဆိုးများမှ လူကြီးမင်း၏ တန်ဖိုးကြီးသော ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပါ။
Protect your prized possessions from unforeseen calamities with KBZMS's Fire & Peril Insurance.
အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ Comprehensive Motor Insurance
တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျယ်ပြန့်သည့် workshop ကွန်ရက်များဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လွယ်ကူချောမွေ့သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ လျော်ကြေးငွေ ဆောင်ရွက်မှုများကို တွေ့ကြုံခံစားလိုက်ပါ။
Enjoy our hassle-free service and on the ground support, backed by an extensive network of authorized workshops and end to end automated processes that ensure fast and efficient claim settlements.
ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု အာမခံ Cargo Insurance
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ပို့ကုန်သွယ် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များမှတဆင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများအား လျှော့ချလိုက်ပါ။
Reduce the risk of financial loss of importing and exporting for your businesses.
ငွေသားလုံခြုံမှု အာမခံ Cash-in-Safe Insurance
အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းတိုင်းသည် ဖောက်ထွင်းမှု သို့မဟုတ် ခိုးယူမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများမှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှုရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ KBZMS ၏ ငွေသားလုံခြုံမှု အာမခံပေါ်လစီသည် သင့်အိမ်တွင်းရှိ သိမ်းဆည်းထားသော ငွေများဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် သင့်အား အာမခံလျော်ကြေးပေးပါသည်။
Every successful business needs complete protection against potential loss from burglary or theft. KBZMS's Cash-in-Safe insurance policy indemnifies you against loss of money kept within your premises.
ငွေပို့ငွေသယ် အာမခံ Cash-in-Transit Insurance
KBZMS ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံမှ လူကြီးမင်း၏ ငွေကို လုံခြုံသောနေရာမှ အခြားတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကာကွယ်ပေးပါရစေ။ KBZMS ဖြင့် လူကြီးမင်း၏ငွေကို လုံခြုံအောင်ထားလိုက်ပါ။
Allow KBZMS Cash-in-Transit insurance to cover you against potential loss from moving your money from one secure location to another. Keep your cash safe with KBZ MS.
သမာဓိ အာမခံ Fidelity Insurance
အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုများနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းညှိမှုများရှိနေသော်လည်း မည်သည့်လုပ်ငန်းမှ လိမ်လည်ရန်ကြိုးစားခြင်းတွင် ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ သမာဓိ အာမခံသည် အလုပ်ရှင်များအား ထိုသို့ကြုံတွေ့မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်း၏ အန္တရာယ်များကို ထိန်းချုပ်ပြီး ယနေ့ပင် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
Despite the best controls and checks and balances, no business is immune from attempted fraud. Fidelity insurance protects employers against such exposures. Take control of your business risks and
ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှု အာမခံ Personal Accident
သင်မမျှော်လင့်ထားဆုံး အချိန်တွင် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ချစ်ရသူများအား ကာကွယ်လိုက်ပါ။
Accidents can happen when you least expect it. Cover yourself and your loved ones in case of accidents or mishaps for your piece of mind.
KBZMS အာရောဂျံ (ကျန်းမာရေး အာမခံ) KBZMS Arrawjan (Health Insurance)
လူကြီးမင်း၏ ကျန်းမာရေးသည် လူကြီးမင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်။ KBZMS အာရောဂျံ ကျန်းမာရေးအာမခံဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များမှ လူကြီးမင်းနှင့်မိသားစုကို ကာကွယ်လိုက်ပါ။
Your health is your most important asset. Protect yourself and your family from medical and surgical expenses with KBZMS Arrawjan Health Insurance.
ခရီးသွား အာမခံ Travel Insurance
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားအာမခံ၊ မိုင် (၁၀၀) အောက် ခရီးသွားအာမခံနှင့် အထူးခရီးသွားအာမခံတို့ဖြင့် စိတ်ပူပင်စရာ ကင်းမဲ့သော ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ မမျှော်လင့်ထားသော ခရီးသွားပြဿနာများမှ အကာအကွယ်ရယူကာ အသိပညာဗဟုသုတများဖြင့် စတိုင်လ်ကျကျ ခရီးသွားလိုက်ပါ။
Haveaworry free journey with our Domestic/ Overseas travel insurance, Under 100 miles travel insurance and Special travel insurance. Travel in style and secure in the knowledge that you are covered from unexpected travel issues.
ရေယာဉ်ကိုယ်ထည် အာမခံ Marine Hull Insurance
KBZMS ၏ ရေယာဉ်ကိုယ်ထည် အာမခံသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် လည်ပတ်နေသော သင်္ဘောကိုယ်ထည်နှင့် စက်ယန္တရားများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကာကွယ်မှုများ ပေးပါသည်။
KBZMS's Marine Hull insurance provides businesses with comprehensive coverage for hull and machinery of vessels operating both inland and overseas.
RequestaFree Life Planning Session
လူကြီးမင်း၏ ဘဝအတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခွင့်ကို ယနေ့ပဲ ရယူလိုက်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သော Life Planner™ များနှင့်အတူ ဘဝတစ်သက်တာ ငွေကြေးအကာအကွယ်များ စတင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် မိနစ်အနည်းအငယ်ခန့်သာ အသုံးပြုပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကို ယနေ့ပဲ ရယူလိုက်ပါ။ယခုအခွင့်အရေးက သင့်စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေမှာ အမှန်ပါ။
Spend justafew minutes with our dedicated professional Life Planners™ and start your journey towardsalife-long financial protection. Book your free session today. You'll be glad you did.
Forafull range of life products, please contact our sister company KBZ Life by clicking on the following link: